Ixabiso lokwenyani leMidiya yoLuntu | Martech Zone
Ixabiso lokwenyani leMidiya yoLuntu
NgoMvulo, Julayi 25, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Abantu Gxi ninisa beka le infographic, wabelana ngedatha yokwenyani kwiindleko, izibonelelo kunye nembuyekezo kutyalo-mali lwamajelo asekuhlaleni. Ndiyayixabisa inyani yokuba baqikelela iiyure ezichithwe ukulawula eliphakathi kwaye babonelele ngeendleko zokuxhamla umyinge weemveliso eziphambili zisebenzisa imidiya yoluntu. Ngaba uyazi ukuba ixabiso eliqhelekileyo lenyanga lomlandeli we-Twitter yi- $ 2.38 ngelixa iindleko zenyanga ukuzigcina ziyi- $ 1.67. Hayi embi tweturn kutyalo-mali!
Baninzi kakhulu abantu ababona imidiya yoluntu njenge khulula. Ngenxa yobungakanani bamajelo abathengisi abaphakathi kufuneka balawule, izixhobo ezinqongopheleyo, ukungasebenzi kwezixhobo kunye nokwahlulahlulwa kwemakethi- ngokuqinisekileyo iindleko kwimidiya yoluntu. Oko kwathethi, kukwakho nethuba elimangalisayo lokufaka isabelo sentengiso ngokubandakanya amathuba kunye nabathengi ngeendaba zosasazo-ngakumbi xa ukhuphiswano lwakho lungekabikho!
Umbhali weWindows Live kwiWindowsPress
Jul 26, 2011 ngo-9: 46 AM
Ngaba umntu unokuchaza izibalo ze-twitter nceda? Kubonakala ngathi utyalo-mali lungaphezulu kwembuyekezo - kwaye iindleko zenyanga nje ngenani elahlulwe ngo-10… ?!
Jul 26, 2011 ngo-2: 51 PM
Kuyinyani ngokuqinisekileyo ukuba umntu kufuneka aphendule indleko zemidiya yoluntu njengenxalenye yomxube wentengiso iyonke. Owona mceli mngeni wam mkhulu kubaxhasi abafuna "ukukhwela ebhodini NGOKU" ngamajelo eendaba ezentlalo, kungakhathalelwanga indawo yayo kwisicwangciso esipheleleyo, okanye kwinto yokuba ayisiyonyango kuyo yonke into yokuba ishishini elitsha liphumelele ngesiquphe ebusuku kwizithuba ezimbalwa zebhlog!
Jul 26, 2011 ngo-9: 15 PM
Oo Doug… Ungandixeleli ukuba awuboni nto ingalunganga ngalo mfanekiso…
Umcimbi wokuqala omncinci ocacileyo: Utyalo-mali lwenyanga / amanani okubuyisa e-Twitter ayatshintshwa xa kusenziwa imephu kwixabiso lomlandeli / kwiindleko. Andiqinisekanga ukuba yeyiphi kodwa ngokujonga ubungakanani belo candelo kwi-infograph, ndiyakholelwa ukuba ngamanani afanelekileyo okubuyela ngaphezulu kunotyalo-mali ebekufanele ukuboniswa. Ngapha koko, ndiyibeka phantsi kwe "typo".
Umcimbi okwenyani ngalo mfanekiso unxibelelwano ngokuchasene nobunzima. Isiphelo esichaziweyo sale grafu kukuba ukwenza abantu bakulandele okanye babe ngumlandeli wakho kubangela ukuba bachithe ngaphezulu. Kukho unxibelelwano phakathi kokuchitha kunye nefeni, kodwa oko akuthethi ukuba kukho ubukho apha. "Abalandeli banama-28% ngaphezulu kunabangengabo abalandeli ukuba baqhubeke nokuthenga uphawu lwakho"? Andicingi ukuba eso sigqibo sifuna infograph. Ukuba ndibeka loo nto ngokucacileyo, ungathi abantu abazithatha njengabalandeli beColt baya kwimidlalo yeColts kwaye banazo iijezi ezingaphezulu kwezo zingazithathi njengabalandeli beColt? Impendulo elula naleyo, akunjalo? Ke ayisiyokuba abalandeli bakho bakaMcDonalds bakaFacebook bachitha imali eninzi kuba bengabalandeli bakho bakaFacebook. Kungenxa yokuba kusenokwenzeka ukuba bachitha imali eninzi sele kwaye bayakuthanda sele begqibe kwelokuba babe ngumlandeli wakho kuFacebook. Oku akunjalo kule fomu yangoku ukuxhasa ithisisi eniza kuyenza ukuba umntu achithe imali ethe kratya kwibreak yakho ngokubenza babe ngabalandeli bakho beFacebook okanye abalandeli bakaTwitter. Ke ngekhe ndingadwelisi elo candelo phantsi kwe "IziBonelelo" kodwa phantsi kwesihloko esithi "Hmm…".
Ngoku into enokuba yinto enomdla kumanani kukuba banokubonisa ukuba kubo bonke abalandeli be-Facebook onabo, bachitha malini ngonyaka / ngenyanga / ngayo nayiphi na into NGAPHAMBI kokuba babe ngabalandeli bakho ngokuchasene nemali abayichithe EMVA kokuba beyi fan ngenxa yemikhankaso oyenzayo kuFacebook. Yimbuyekezo yokwenene kutyalo-mali lwakho. Ewe kunjalo, akunakwenzeka ukuba ulandele umkhondo.
Anditsho ukuba ubukho beendaba zosasazo abunazibonelelo. Nditsho nje ukuba amanani angalungiswanga kakuhle njengoko ebonisiwe kule infograph awancedi ukwenza elo tyala okanye ancede umntu enze isigqibo sokungena kwimithombo yeendaba. Ukuba kukho nantoni na amanani eendleko angoyikisa abantu abayiqondayo into yokuba izibonelelo eziboniswe kwi-infograph ngokwenyani azibonisi sibonelelo sinyani sokuxhasa iindleko.
* ukhulula umnqwazi woMmeli kaMtyholi *